« Fandemen-tsaina » -
AccueilTresaka« Fandemen-tsaina »
11/05/2018 admintriatra Tresaka 0
Firy moa ny malagasy maty nataon’ny mpanao politika sorona nandritry ny hetsika 10 aogositra 1991, 07 febroary 2009 nandroMbahana fahefana tamin’izany saingy mba inona moa no niova teto amin’ny firenena ? Ireo mpitari-tolona no nahazo seza sy afaka nampianatra ny zanany tany an-dafy. Ny vahoaka tsotra nitolona mbola miady amin’ny fahantrana hatramin’izao: natao fotsiny hoe “maty ho an’ny tolona” dia izay. Na ny anarany aza mety tsy ho tsaroan’ireo nahazo tombontsoa tamin’izany akory. Dia toa izany hatrany no fomba fakan’ireo mpanao politika fahefana rehefa matahotra fifidianana izy.
Tamin’izany no efa nampiasaina io teny hoe « fanovana » io. Rehefa hampiasa io izay ny mpanao politika, dia handroso olona hataony sorona hakany seza izy izay. Teny enti-mambambo ny mpanao fihetsiketsehana fotsiny ny hoe « fanovana » fa raha ny marina, tsy ireo olona hitaNtsika amin’izao fotoana mitabataba amin’ny « micro » ireo no afaka hitondra fanovana. Efa teo avokoa ireo efa nitondra ary efa nomen’ny vahoaka fahefana fa tsy hita izay fanovana nentiny. Ny sasany aza voarohirohy amin’ny raharaha fahatrarana vola maloto amina miliara tao anaty fiarany. Fandemen-tsaina fotsiny izany teny hoe « fanovana » izany. Porofon’izany io tsy fahazoany olona io. Raha tena izy ireo no inoan’ny malagasy fa mitondra ho an’ny amin’ny fanovana, dia tsy mila manery olona ho avy eo amin’ny 13 mey ry zareo. Aiza ve ka terena sy rahonana any anaty minisitera any mihitsy ny mpiasa mba ho avy eny amin’ny 13 mey. Tsy maintsy eny mantsy no hanaovan’ireo depiote mpitarika ny kabary fandemen-tsaina sy fanasana atidoha.
Izay vahoaka mitady ho tonga saina sy mitady tsy hety hatao sorona dia lemena amin’ny teny hoe “ ho an’ny tombontsoan’ny tolona”. Mandeha isan’andro eo amin’ny 13 mey tokoa ny fanasana atidoha mba tsy hatahotra na dia alefa eny amin’ny “zone rouge” aza. Zone rouge na faritra voarara tsy azo anaovana fihetsiketsehana izany “banky foibe etsy Antaninarenina izany”, ny eny Iavoloha. Efa nanambara izany ny teo anivon’ny Tafika, fa mbola tsy mampaninona ireo mpitarika fihetsiketsehana izany satria tsy ry zareo no ho faty eny raha misy ny fitifirana.
Mbola tsy nisy mpitarika ny hetsika fanongaNam-panjakana voatifitra izany teo amin’ny tantara, fa ny olon-tsotra ihany no nataony sorona.